Mkpa mmanụ dị mkpa maka Lovehụnanya - N'ogbe mgbasa dị mkpa maka mmanụ dị mkpa | AromaEasy
Ihe na June 25, 2020 June 25, 2020 by Matt
Anyị na-ekerịta mmanụ kachasị mkpa kachasị mma maka ịhụnanya maka gị
Daypo isbọchị bụ ụbọchị ahụ pụrụ iche mgbe ịhụnanya na ịhụnanya gbara anyị gburugburu. Ọ bụ oge iji soro ndị ị hụrụ n'anya hụ n'anya na nraranye gị mgbe ị na-hakọ ma mekwaa ka mmekọrịta dị ọhụrụ. Ihe ndị na-adọrọ adọrọ ma na-akpali akpali, mmanụ dị mkpa nwere ike ịkpalite mmetụta nke mmetụta ịhụnanya, ịhụnanya, na mmasị.
Guo na iweputa mmanu mmanu kachasi nma nke ihunanya.
Osisi isii kachasị mkpa maka ịhụnanya
Achịkọtala m mmanụ mmanụ dị mkpa kacha mkpa na - enyere mmadụ aka. Ma ị na-eme atụmatụ ụbọchị mbụ gị ma ọ bụ 100, mmanụ ndị a dị mkpa bụ mgbakwunye na atụmatụ planspo yourbọchị Ọhụụ gị.
1.Osisi Ndị Dị Mkpa Maka Lovehụnanya-Rose
Ihe nnọchianya nke ịhụnanya, rose, na -emepụta mmanụ nwere isi anụ ọkụ nke jikọtara na obi anyị. Rose na mmanụ mkpa ya mepụtara, na-akwalite mmekọrịta chiri anya na nguzozi mmetụta uche. Dị ka ihe na-eme ka ahụ dị jụụ, nke na-eme ka ahụ dị jụụ, ọ bụ ihe ijuanya na mmanụ mmanụ dị mkpa ka ejiri ya mee ihe dị ka aphrodisiac. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihunanya, mmanụ dị oke mkpa bụ nnukwu ebe ịmalite.
Olee otú iji rose mkpa mmanụ maka ihunanya:
Gwakọta n’ime ihe na-esi ísì ụtọ ka gị na gị soro gị
Dab 1-2 tụlee nke rose ngwakọta n’azụ ntị na na nkwojiaka na iku ume
ma ọ bụ kewapụ ha abụọ ka gị na onye ị hụrụ n'anya nwee obi ụtọ.
otu ngaji mmanụ a honeyụ (kwesịrị ịbụ ọkwa nri)
abụọ tụlee nke rose mkpa mmanụ
Mmanụ aki oyibo - ọkara otu ngaji
Nwuo ngwakọta niile ruo mgbe ị nwere ngwakọta n'ikpeazụ. Jiri obere ego na egbugbere ọnụ gị, wee jiri mmiri ọkụ sachaa egbugbere ọnụ gị.
Atụmatụ sitere na AromaEasy: Rose mmanụ dị mkpa nwere isi siri ike, gbalịanakọta na mmanụ mmanụ dị mkpa ma ọ bụ mmanụ ụgbọelu.
A na-eji Ylang ylang mee ihe dịka ọgwụ ịhụnanya ịhụnanya zuru ụwa ọnụ. Isi ísì ụtọ nke ylang-ylang na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime mmanụ ndị kachasị ewu ewu maka ịhụnanya. Ihe na-egbu egbu na-egbu egbu na-enyere aka ịhapụ ihe mgbochi ma na-ebelata nchekasị na nchegbu. Ylang ylang isi mmanụ dị mkpa na-atọ ụtọ nke ukwuu na ojiji ya dịgasị iche. N’oge ochie, ndị mmadụ na-etinye akwa ylang-ylang ọhụrụ n’elu akwa nke ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ.
Ylang ylang nwere okpukpo nwere ume, yabụ na ị nwere ike ihu isi ya wee ju gị anya oge ụfọdụ. Ọtụtụ mgbe, ime mmanụ na mmanụ Ifuru ndị ọzọ ga-eme ka isi ahụ dị ntakịrị, ebe ọ na-emekwu ka Ylang-Ylang dị irè. Ọzọkwa, ịnwere ike iji ụfọdụ isi ísì dị omimi.
enwe ylang ylang mmanụ dị mkpa ya na onye gi
Dilute Ylang-Ylang n’ime mmanụ ụgbọelu dịka mmanụ ịhịa aka n'ahụ maka ma ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Mgbasa oria site na mmanu di nkpa
Na-ahụ n'anya usoro ihe ọmoụ forụ maka udechi abalị
Atọ na ato ylang ylang mmanụ dị mkpa
Abụọ na-atọ mmanụ oroma dị mkpa mmanụ
Otu mkpọda bilitere mmanụ dị mkpa
Jiri uzommeputa ihunanya a site na mmanu di nkpa. Ghazigharị ihe ndabara gị na-atụle oghere ime ụlọ gị, wee dezie ya n'ime ụlọ ihi ụra gị
3. Osisi Ndị Dị Mkpa Maka Lovehụnanya - Jasmine
Jasmine nwere isi na-ekpo ọkụ, ejiri ya mee ihe dị ka aphrodisiac dị mkpa maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị kemgbe narị afọ. Researfọdụ nnyocha gosipụtara na isiokwu nke Jasmin dị mkpa pụrụ inyere ndị mmadụ aka ịmụrụ anya site na mmetụta ndị na-eme ka mmadụ nwee ume ọhụrụ.
Anyị na-ewepụta mmanụ a dị oke mkpa na petal jasmin siri ike zitere ugbo ndi Philippines. Jasmine bụ otu n'ime mmanụ m dị mkpa maka ịhụnanya. Ísì ụtọ ya nwere ike ibuli mmụọ gị elu ma mee ka e nwee obi ike.
Gbalịa isi sultry a na n'ime aka gị, na azụ gị, yana n’azụ ntị gị.
Kpoo mmanu mmanu mmanu nke mmanu ndi mmadu no.
Enchantress esi ísì ụtọ
Atọ tụfuru frankincense
Atọ na-ada oroma dị ụtọ
Tinye ngwakọta ịhụnanya a dị mkpa na karama dị milimita iri, wee jiri mmanụ na-ebu mmanụ ka almond ma ọ bụ jojoba mechie vial ahụ. Ikwanye vial ọma tupu i jiri ya.
Ọmụmụ ihe na-ekpughe mmekọrịta dị n'etiti nnyonye anya ọgbụgba ọbara na mmanụ dị mkpa. Ndị ọrụ nyocha ahụ chọpụtara na mmịpụta dị nịịra nke pọgị dị mkpa mmanụ rụpụtara na-egbochi nkụchi nwanyị. Ọmụmụ ihe a na-egosi na clary sage nwere akụrụngwa na-edozi idozi.
Mgbe a na-ebelata libido n'ihi mgbanwe nke homonụ dịka menopause, clary sage bụ hormone na-edozi ahụ nke nwere ike iweta belata.
Etu esi eme: Wepu 3-5 n’ime ihe dị mkpa mmanụ disọrọ, ma ọ bụ iku ume oge kwa ụbọchị iji zuru ike, mezie homonụ, ma bulie mmụọ gị.
5. Mmanụ dị mkpa maka forhụnanya - Neroli
Mmanụ dị mkpa amịpụtara site na ifuru mmanụ oroma, neroli, akpọkwara dị ka mmanụ mmanụ mmanụ dị mkpaJehova bụ mmanụ dị oké ọnụ ahịa, nke bara uru. Mmanụ a dị mkpa maka ịhụnanya nwere ike inye aka melite ọnọdụ ahụ site n'inyere gị aka ime ka ahụ dị jụụ.
N'ime ule na-adịbeghị anya, a chọpụtara na neroli belata ihe mgbaàmà menopausal, na-akpalite libido, ma na-achịkwa ọbara mgbali ụmụ nwanyị mgbe a na-eme ya. Nnyocha a na-egosi na mmanụ mmanụ mmanụ dị mkpa mmanụ na-enyere aka mgbe libido dị ntakịrị n'ihi mgbanwe nke homonụ, ma ọ bụ nchegbu.
Ihe jikọrọ ọnụ ga - agbasa
Mbepu abụọ nke mmanụ oroma si na mmanụ dị mkpa
Otu mkpọda bilitere
Otu mmiri rosemary
Ngwakọta nkwekọ a dị mma maka ịgbanye ma ọ bụ na-agbakwunye na mmiri ọkụ.
Etu esi eji asa ya
Tinye mmanu mmanu di nkpa na otu ounce nke mmanu, ma ghaa n’ime nnu bat a di nma n’ime ahu, gbakwunye na okpomoku di ocha.
6. Oji oji
Obere ojii ojii na -eme ka sandalwood na peawara. Jiri uzommeputa a meputa ihe ga-eme gi obi uto!
Mmanụ nkwado ịhụnanya
6 daa sandalwood
3 tụlee ose ojii
2 tụlee pepemint dị mkpa mmanụ
1 mmanụ mmanụ mmanụ dị ụtọ
Tinye ntụpọ ịhụnanya a na mmanụ ụgbọelu abụọ na-ebu mmanụ, mee ka ihe niile sie ike ruo mgbe ị ga-eme ka ọ dị mma. Gbanyụọ ọkụ ahụ, werezie ntụgharị na-emechi ibe gị ma laghachi na njiko na ịhụnanya.
Mmanụ Ala Dị Mkpa oroma
Na mkpokọta, oroma na-atọ ụtọ, mgbe naanị etinyere ya, enweghị ike inyere aka na nsogbu hormone. Akụkụ na-atọ ụtọ bụ, Otú ọ dị, oroma dị ụtọ na-enweta ọtụtụ mmanụ aphrodisiac dị mkpa.
ebe ọ bụ na mmanụ oroma dị ụtọ a na-ejikarị ya na mmanụ ndị ọzọ dị mkpa maka ịhụnanya, ọ ga-amasị m itinye ya na listi a.
Isi okwu AromaEasy
Mara na gbapụ mmanụ citrus dị mkpa ma ọ bụrụ n’ị ga-aga n’èzí n’okpuru ìhè anyanwụ na awa ole na ole sochirinụ.
Iji nwetakwuo nkọwa banyere mmanụ mmanụ dị mkpa, gaa leta a: ụtọ oroma mkpa mmanụ uru.
Rose, Ylang-ylang, Jasmine, Neroli… Ekerewo m mmanụ isii kachasị mkpa maka ịhụnanya. Agbanyeghị, rịba ama na ihe kachasị mkpa bụ ịhọrọ isi ísì ụtọ gị, yana mmanụ dị mkpa ga-eme gị na onye gị na ya na-emekọ ihe.
N'ime ọkwa a, ekwuwo m ọtụtụ mmanụ ngwakọta dị mkpa maka ịhụnanya. Gbaa mbọ hụ na ị na-agbasosi ike n'iji ya mee ihe kwesịrị ekwesị site na ịlele post izizi a: ole tụlee mmanụ dị mkpa na onye nkesa?
Ọzọkwa, mara na anyị ekwesịghị itinye mmanụ dị mkpa na skins anyị tupu anyị agbaze ya. Na ọrụ dilution dị mfe - naanị tinye mmanụ gị dị mkpa na mmanụ ụgbọelu dịka alimon ma ọ bụ jojoba.
M kwurịtara ịhịa aka n'ahụ mmanụ dị mkpa Tupu mgbe ahụ, gaa na post ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu nkọwa banyere isiokwu a.